UClaro Argentina ungu Empresa wezokuxhumana owazalwa ngoNdasa wezi-2008. Lo osebenza naye ungumholi nakwamanye amazwe, njengalawa: Brazil, Chile, Colombia, E-Costa Rica, I-Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico kanye ne-Uruguay.
Le nkampani inikeza izinsiza ezithuthukisiwe zamaselula, zasendlini, ze-inthanethi nezingenazintambo ngendlela emisha ngobuchwepheshe be-4G ngaphansi kwe-HSPA. Inezinhlelo ezikhokhwa ngaphambili nangemuva ezivumelana nezidingo zomsebenzisi ngamunye.
Uma usuvele uyingxenye ye-Claro Argentina futhi ufuna ukwazi ukuthi ushajwa kanjani kabusha ulayini wakho, qhubeka ufunda. Lapha sizokutshela ukuthi kanjani gcwalisa kabusha iselula yakho ngokushesha futhi kalula, ngokusebenzisa ukushajwa kabusha okubonakalayo, ngamashaji enkokhisweni yakho noma ngokusebenzisa amakhadi akho edebhithi noma esikweletu.
Ukushajwa kabusha okubonakalayo kwe-Claro Argentina
Shaja kabusha Ezikhungweni Zesevisi Yabathengi, Amakhiwokhi, izikhungo zezingcingo, izitolo ezinkulu, Inkokhelo Elula, I-Red Link kanye nama-ATM akwa-Banelco. Ukuze wazi amaphuzu aseduze ngena lapha, bhala ikheli futhi ebalazweni uzothola amagatsha atholakalayo.
Ungasebenzisa futhi UMercado Pago ngekhadi lakho lesikweletu. Sebenzisa umakhalekhukhwini wakho ukushajwa kabusha ulayini wakho we-Claro Argentina. Yenza impilo yakho ibe lula ngalesi simiso esisha, ngeke kudingeke ushiye indawo yakho. Kuyisevisi ye-inthanethi engu-100%.
Ngezindleko kubhili yakho
Ngena ngemvume Icacile yami ngokuchofoza "Bhalisela". Uma ulayini wakho ukhokhelwe ngeposi, faka futhi ukhokhe isikweletu sakho, esigabeni Sezinsizakalo "Ukulayishwa kabusha Kwesikweletu ”.
Ungakwenza futhi ngokusebenzisa *611 # kusuka kumakhalekhukhwini wakho, cindezela ucingo ngokukhethwa kukho "Balance charge", inani lizobonakala ku-invoyisi yakho elandelayo.
Kodwa uma unohlelo lokulawula, thumela i-SMS mahhala ku-22742 nenani ozolishajwa kabusha. Khumbula ukuthi akufanele ube nezikweletu noma izikweletu usalinde ukukhokhelwa.
Ukusebenzisa amakhadi akho edebhithi noma esikweletu
Ukuze ushaje kabusha ngamakhadi akho asebhange, sebenzisa Amaphakethe Manje!. Uma une-Prepaid noma Control Plan, phatha inkokhelo yakho ngokufaka nje inombolo yocingo ehlobene nelayini ye-Claro Argentina, cindezela “Qhubeka”. Bese wenze ukuqinisekiswa usebenzisa ikhodi ethunyelwe nge-SMS.
Isevisi iyatholakala khokha ama-akhawunti ami , ngaphandle kokushiya ikhaya lakho kanye neyakho Amakhadi e-Visa noma e-MasterCard. Khetha ibhange lakho, faka i-ID yakho nephasiwedi yakho. Hamba kunketho Khokha> Ukugcwaliswa kabusha bese ukhetha Yebo Ukuze uqedele ukubhala inombolo yeselula, inani kanye nezindlela zokukhokha.
Phezulu ngamaphuzu eClaro Club
Uma ungoweClaro Club Black, Ebomvu noma ekhokhelwa ngaphambili ungakwazi hlenga amaphuzu akho anqwabelene ngekhredithi kulayini wakho wefoni, ngalokhu kushintshana ungakhuluma futhi uthumele imilayezo yombhalo.
Ukuze ushintshe amaphuzu akho iya ku club ecacile noma shayela u-*611 # kusuka kumakhalekhukhwini wakho ngokubheka inketho club ecacile. Ungasebenzisa futhi i-My Clear APP.
Sebenzisa uhlelo lokusebenza leselula ukuze ushaje kabusha
Landa uhlelo lokusebenza, gcwalisa futhi uphathe i-akhawunti yakho ye-Claro Argentina. Ungakwenza kusuka -Google Play ye-Android noma App Store iyahambisana ne-iPhone, i-iPad ne-iPod touch.
Itholakalela imigqa emikhulu ekhokhelwa kusengaphambili, Uhlelo Lokulawula noma Uhlelo Lwamahhala, ukuzulazula ngoxhumano lwe idatha noma i-WiFi.
Ngalolu hlelo lokusebenza ungakhokha izikweletu zakho, gcwalisa kabusha ulayini wakho, hlola ibhalansi nokunye okuningi. Yonga isikhathi futhi uphathe ukusebenza kusuka kumakhalekhukhwini wakho futhi ngaphandle kokushiya lapho ukhona.
Ngechip esikhokhelwa ngaphambili ukhuluma mahhala nabo bonke uClaro izinsuku ezingu-30 ushajwa kabusha kusukela ku-$50 futhi kuzo zonke izinkampani kusukela ku-$300, unamaphakethe edatha ane-WhatsApp, imidlalo yamahhala namamegabhayithi ezipho.
Amaphekhi Okuzulazula e-Claro: Phequlula sengathi ulapha ngokuzulazula kwamahhala + kwamaphakethe e-WhatsApp
I-Claro Loan: Uma udinga isikweletu esengeziwe ukuze uthenge lelo phakethe olifunayo, cela i-Claro Loan yakho manje. Kulula futhi kuyashesha
I-Turistas Claro: Indlela elula neshesha kakhulu yokuhlala uxhumekile e-Argentina. Yazi konke okunikezwayo nolwazi oludingayo ukuze uzulazule phakathi nokuvakasha kwakho
Sula Uhlelo 1️
I-inthanethi 1 giga + WhatsApp mahhala; Izingcingo ezingenamkhawulo kubo bonke uClaro; Izingcingo ezingenamkhawulo eziya kwezinye izinkampani; Amaphakethe Okuzulazula; I-SMS engenamkhawulo; Amamuvi nochungechunge Mahhala
Sula Uhlelo 2️
I-Internet 2 gigs + WhatsApp mahhala; Izingcingo ezingenamkhawulo kubo bonke uClaro; Izingcingo ezingenamkhawulo eziya kwezinye izinkampani; Ukuzulazula kufakwe emazweni angomakhelwane; I-SMS engenamkhawulo; Amamuvi nochungechunge Mahhala
Sula Uhlelo 3️
I-inthanethi 4 gigs + WhatsApp mahhala; Izingcingo ezingenamkhawulo kubo bonke uClaro; Izingcingo ezingenamkhawulo eziya kwezinye izinkampani; I-Roaming America yayihlanganisa; I-SMS engenamkhawulo; Amamuvi nochungechunge Mahhala
Sula Uhlelo 4️
I-inthanethi 7 gigs + WhatsApp mahhala; Izingcingo ezingenamkhawulo kubo bonke uClaro; Izingcingo ezingenamkhawulo eziya kwezinye izinkampani; I-Roaming America yayihlanganisa; I-SMS engenamkhawulo; Amamuvi nochungechunge Mahhala
Sula Uhlelo 5️
I-Internet 10 gigs + WhatsApp mahhala; Izingcingo ezingenamkhawulo kubo bonke uClaro; Izingcingo ezingenamkhawulo eziya kwezinye izinkampani; I-Roaming America yayihlanganisa; I-SMS engenamkhawulo; Amamuvi nochungechunge Mahhala
Sula Uhlelo 6️
I-Internet 15 gigs + WhatsApp mahhala; Izingcingo ezingenamkhawulo kubo bonke uClaro; Izingcingo ezingenamkhawulo eziya kwezinye izinkampani; Ukuzulazula kweMelika naseYurophu kwakuhlanganisa; I-SMS engenamkhawulo; Amamuvi nochungechunge Mahhala.
Phezulu kuselula » Izinkampani » Shaja kabusha i-Claro Argentina
Amazwana angu-1 kokuthi "Shaja kabusha uClaro Argentina"
Pingback: Ungawushaja kanjani kabusha ulayini we-Claro - TecnoQuo.com - Ubuchwepheshe Namafoni